ဘူနီယွန် ဘယ်သူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ချေများလဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးစင်တာ » အရိုးနဲ့ကြွက်သားကျန်းမာရေး » ဘူနီယွန် ဘယ်သူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ချေများလဲ
ဘူနီယွန် ဘယ်သူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ချေများလဲ
Bunion ရဲ့ လက္ခဏာတွေကို သတိထားမိပြီဆိုရင် သတိရသင့်တဲ့ အရေးကြီးအချက်များစွာ ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်ကတော့ ကုသမှုမြန်မြန်ခံယူလေလေ ဒီအခြေအနေကို သက်သာနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ Bunion တွေဟာ သူတို့ဘာ့သာ ပျောက်မသွားနိုင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ မကုသဘူးဆိုရင်တော့ ပိုဆိုး၊ ပိုနာကျင်ပြီး ပိုမာလာကာ ပျောက်ဖို့ ခက်လာပါလိမ့်မယ်။ တတိယတစ်ချက်ကတော့ Bunion ကြောင့်မသေနိုင်ပေမယ့် သူဟာ ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Bunion တွေဟာ အချိန်တိုင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ပြီးကလေးမှာရော လူကြီးမှာပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းတာကတော့ သင်ဟာ Bunion နဲ့ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချက်တွေကို သိထားတယ်ဆိုရင် သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
Bunion ဟာ ခြေမအောက်ခြေမှာ ဖြစ်တဲ့ မာကျောတဲ့အဖုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရိုး၊ တစ်ရှူးတွေ အဆစ်ပတ်ပတ်လည်မှာ ကြီးထွားတယ်ဆိုရင် Bunion ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ခြေမကို အခြားခြေချောင်းတွေဘက်ကို မျက်နှာမူအောင် တွန်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ Bunion အပေါ်မှာလည်း အသားမာတက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက Bunion ကိုပိုဖြစ်စေနိုင်သလဲ။
သင့်မှာအောက်ပါအချက်တွေရှိရင် Bunion ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်း – အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ဒီအခြေအနေ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တင်းကျပ်လွန်းသော၊ ကျဉ်းလွန်းသော၊ သေးလွန်းသော၊ ဒေါက်မြင့်လွန်းသော ဖိနပ်ကိုစီးခြင်း – ဒါဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဒီအခြေအနေပိုဖြစ်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေရဲ့ဖိနပ်တွေဟာ သူတို့ခြေထောက်နဲ့ ကွက်တိကျလေ့ရှိပါတယ်။
လမ်းလျှောက်စဉ်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ခြေဖဝါးအတွင်းဘက်သို့ လိပ်ခြင်း
Bunion ရှိဖူးသူ မိသားစုဝင်ရှိခြင်း
Rheumatoid အဆစ်ရောင်ခြင်း (ခြေမအဆစ်နဲ့ အခြားအဆစ်များ ရောင်ခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း)
ဂေါက်ရောဂါ၊ ခြေမအဆစ်ပါဝင်သော အဆစ်ရောင်ခြင်းများ
ခြေထောက်အပေါ် ဖိအားများစေတဲ့ အလုပ်၊ ဝါသနာ (ဥပမာ ပြေးခြင်း) ရှိခြင်း
Flatfoot သို့ low arches ရှိခြင်း
Bunion ကို ဘယ်လိုကုသနိုင်မလဲ။
Bunion က မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင် သင့်ခြေချောင်းတွေကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေမယ့် ဖိနပ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ကုသမှုတွေမှာတော့ အောက်ပါနည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Bunion pads သို့ ကျန်းမာရေး (သို့) အားကစားတိတ်
ဖိနပ်အတွင်းထည့်နိုင်သော အထူးပြုလုပ်ထားသော အရာများ
ဆေးဆိုင်တွေမှာ ဝယ်နိုင်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ
Bunion ကို ခွဲစိတ်မှုဖြင့် ဖယ်ထုတ်ခြင်း
ကုသမှုမခံယူဘူးဆိုရင် Bunion တွေဟာ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ ဆီးချို၊ အခြားသွေးလှည့်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ရောဂါရှိတယ်ဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုး ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားပါတယ်။
သင့်ခြေထောက်ကို ပြဿနာရှိမရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပြီး ပြဿနာတစ်ခုခု တွေ့ခဲ့ရင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 31, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 14, 2019
Bunions - What Increases Your Risk. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/bunions-what-increases-your-risk. Accessed January 15, 2017.
Treating bunions. http://www.nhs.uk/Conditions/Bunion/Pages/Treatment.aspx . Accessed January 15, 2017.
Bunions. http://www.acfaom.org/information-for-patients/common-conditions/bunions . Accessed January 15, 2017.